पशुपतिमा आर्यघाटमा आज देखिएको यो दृश्य, फेरी कहिल्यै देख्न नपरोस, हे भगवान – Classic Khabar
पशुपतिमा आर्यघाटमा आज देखिएको यो दृश्य, फेरी कहिल्यै देख्न नपरोस, हे भगवान
May 3, 2021 175
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को दोस्रो लहर ती’व्र भएसँगै पशुपति क्षेत्रस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा सङ्क्रमण भई निधन भएकाको शव आउने क्रम बढ्न थालेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण भई निधन भएका दैनिक सरदर ३० को हाराहारीमा शव आउन थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय शवदाह गृहमा तीनवटा शवदाह यन्त्र छन् । यी यन्त्रले न’भ्याएपछि हाल वाग्मती किनारमा पनि सङ्क्रमण भई निधन भएकाको शवदाह हुन थालेको छ ।
सङ्क्रमण भई निधन भएकाको चाप विद्युतीय शवदाह गृहमा बढ्न थालेपछि पाँच वटा यन्त्र दाउराबाट ज’लाउन मिल्ने गरी थप्न लागिएको कोषले जनाएको छ । यी यन्त्र यसै हप्ता तयार भइसक्ने जनाइएको छ । गत वर्ष जेठ पहिलो सातापछि कोरोना सङ्क्रमण भई निधन भएकाको शव विद्युतीय शवदाह गृहमा आउन थालेको थियो । गत वर्ष धेरै शव आएका दिन १५ वटासम्म आउने गरेको थियो ।
यसवर्ष कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दर बढेकाले पशुपतिमा शव आउने क्रम पनि बढेको हो । विद्युतीय शवदाह गृहको एउटा यन्त्र दुई दिनअघिदेखि बिग्रिएका कारण पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव वाग्मती किनारका अन्य स्थानमा ज’लाउनु परेको कोषका प्रशासकीय अधिकृत कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । बि’ग्रिएको यन्त्र मर्मत गर्न लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भष्मेश्वर र आर्यघाटमा पनि कोरोनाको दर ती’व्र भएसँगै शव आउने क्रम बढ्न थालेको कोषले जनाएको छ । घाटमा सामान्य अवस्थामा निधन भएका ४० वटासम्म शव आउन थालेको छ । भष्मेश्वरमा नौ र आर्यघाटमा दुई गरी ११ घाटमा शवदाह हुने गरेको छ । यी ११ वटै घाटमा दाउराबाट शवदाह हुने गरेको छ ।
विद्युतीय शवदाह गृहमा पौने घण्टादेखि एक घण्टासम्ममा शवदाह हुने गरेको छ । दाउराबाट ज’लाइ’ने घा’टमा तीनदेखि चार घण्टामा शवदाह सकिने गरेको छ । बाँकि तस्विर तल हेर्नुहोस
Prevपसलमा काम गर्न राखेको युवतीलाई सिन्दुर हाले, ४ महिनाकी गर्भवती संगीतालाई के भयो होला ? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextकोरोनाको जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे अब लकडाउन पनि निकै कडा पार्ने घोषणा !
दाईजो मा लिएको बाइक चलाऊन न जाने पछी जुवाई को भयो यस्तो बेज्जत (भिडियो हेर्नुस्)
भखरै दोलखामा ८ बजेर ४१ मिनेटमा गयो भुकम्प
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरियो, अझै मैदानबाट लडिरहनेछु – रामचन्द्र पौडेल
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (908)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (724)